လုပျငနျးတဈခုအတှကျ Website ရှိထားခွငျးရဲ့ကောငျးကြိုးမြား -
လူကွီးမငျးတို့ လုပျငနျးအတှကျ Website ဆောကျလုပျထားပါသလား? လုပျငနျးအတှကျ Website မရှိဘူးဆိုရငျတော့ Website ရှိထားခွငျးခွငျးရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှကေို ဖျောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ…
ယခုခတျေမှာ ဆိုရငျတော့ တဈခုခုသိခငျြတာရှိရငျ Information တှကေို Internet ပျေါကနရှောလာကွပါတယျ။ Advertising ပိုငျးမှာဆိုရငျလညျး Investment ကိုပိုမိုသကျသာစပေါတယျ။ အရငျတုနျးက သငျ့လုပျငနျးကို Television, Radio, Print အစရှိတဲ့ Advertising ပုံစံတှနေဲ့ ကွျောငွာခဲ့တဲ့ Investment ထကျ၊ သငျ့လုပျငနျးကို Website တညျဆောကျပွီး Advertising လုပျတဲ့ Investment က အမြားကွီးသကျသာစပေါတယျ။ တဈခြို့ Offline Advertising Tool တှဟောဆိုရငျ Internet ပျေါမှာ Free ရရှိနိုငျတဲ့ အထိတောငျရရှိ စပေါတယျ။
Website ရှိထားခွငျးရဲ့ နောကျထပျအားသာခကျြတဈခုက သငျ့လုပျငနျးအတှကျ Marketing နဲ့ Advertising ကို သငျ့လုပျငနျးနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ Audience ဆီကို လိုကျလြော ညီထှဖွေဈဖွဈနဲ့ ရောကျရှိစပေါတယျ။ Website ရှိထားမယျဆိုရငျ သငျ့လုပျငနျးကို နညျးလမျးအမြားအပွားနဲ့ Audience တှဆေီကို
ရောကျရှိအောငျ ကွျောငွာနိုငျပါသေးတယျ။ (ဥပမာ – သငျ့ Website က Information တှကေို Facebook အစရှိတဲ့ Social Media Network တှနေဲ့ပါခြိတျဆကျ လုပျဆောငျနိုငျခွငျး) အခွား Digital Marketing Toolတှဖွေဈတဲ့ SEO, SEM, PPC တှကေိုပါ အသုံးပွုထားမယျဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ Website ဟာပိုမို ကောငျးမှနျတဲ့ ရလဒျတှပေိုငျဆိုငျနိုငျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ SEO, SEM, PPC အစရှိတဲ့ နညျးပညာတှေ အကွောငျးကို သိရှိလိုပါက SEOMyanmar Website မှာဝငျရောကျလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
Website ရှိထားခွငျးအားဖွငျ့ သငျ့လုပျငနျးရဲ့ Potential Sale တှလေညျး ပိုရရှိလာစနေိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ လုပျငနျး Information တှကေို Update ပုံမှနျလုပျပေးခွငျး၊ Quality ကောငျးတဲ့ Content တှတေငျပေးခွငျး၊ Promotion ပွုလုပျပေးခွငျး တှနေဲ့လညျး Audience Engagement တှကေို ပိုမိုရရှိစနေိုငျပါသေးတယျ။
ယခုဖျောပွခဲ့တဲ့ ကောငျးကြိုးတှကွေောငျ့လူကွီးမငျးတို့လုပျငနျးကို Website နဲ့ ခြိတျဆကျ အသုံးပွုကွညျ့ဖို့ အကွံပွုပါရစေ။
လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် Website ရှိထားခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးများ
လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းအတွက် Website ဆောက်လုပ်ထားပါသလား? လုပ်ငန်းအတွက် Website မရှိဘူးဆိုရင်တော့ Website ရှိထားခြင်းခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…
ယခုခေတ်မှာ ဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုသိချင်တာရှိရင် Information တွေကို Internet ပေါ်ကနေရှာလာကြပါတယ်။ Advertising ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း Investment ကိုပိုမိုသက်သာစေပါတယ်။ အရင်တုန်းက သင့်လုပ်ငန်းကို Television, Radio, Print အစရှိတဲ့ Advertising ပုံစံတွေနဲ့ ကြော်ငြာခဲ့တဲ့ Investment ထက်၊ သင့်လုပ်ငန်းကို Website တည်ဆောက်ပြီး Advertising လုပ်တဲ့ Investment က အများကြီးသက်သာစေပါတယ်။ တစ်ချို့ Offline Advertising Tool တွေဟာဆိုရင် Internet ပေါ်မှာ Free ရရှိနိုင်တဲ့ အထိတောင်ရရှိ စေပါတယ်။
Website ရှိထားခြင်းရဲ့ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Marketing နဲ့ Advertising ကို သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Audience ဆီကို လိုက်လျော ညီထွေဖြစ်ဖြစ်နဲ့ ရောက်ရှိစေပါတယ်။ Website ရှိထားမယ်ဆိုရင် သင့်လုပ်ငန်းကို နည်းလမ်းအများအပြားနဲ့ Audience တွေဆီကို
ရောက်ရှိအောင် ကြော်ငြာနိုင်ပါသေးတယ်။ (ဥပမာ – သင့် Website က Information တွေကို Facebook အစရှိတဲ့ Social Media Network တွေနဲ့ပါချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း) အခြား Digital Marketing Toolတွေဖြစ်တဲ့ SEO, SEM, PPC တွေကိုပါ အသုံးပြုထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ Website ဟာပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ SEO, SEM, PPC အစရှိတဲ့ နည်းပညာတွေ အကြောင်းကို သိရှိလိုပါက SEOMyanmar Website မှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Website ရှိထားခြင်းအားဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ Potential Sale တွေလည်း ပိုရရှိလာစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်း Information တွေကို Update ပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်း၊ Quality ကောင်းတဲ့ Content တွေတင်ပေးခြင်း၊ Promotion ပြုလုပ်ပေးခြင်း တွေနဲ့လည်း Audience Engagement တွေကို ပိုမိုရရှိစေနိုင်ပါသေးတယ်။
ယခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကြောင့်လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းကို Website နဲ့ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
Posted by Min Thuta/ Monday February 18th, 2019/ Blog/0Comment